ဟာသသရော်စာ | Mg Ogga's Notes
ဟာသလေးတွေ မချိပြုံးဖို့ သရော်စာလေးတွေ
လက်ထပ်ဖို့ ရန် ဘာတွေလို (ပုံပြင်) :P
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ချာရာဏသီပြည်ကြီးမှာ ချာကလာရွှေပြည် ဆိုတဲ့ ရွာကြီးတစ်ရွာရှိသတဲ့။ ဒီရွာကြီးက အခြားရွာတွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ချက်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင် (ယောကျာင်္း ယူ၊မိန်းမယူ)ရင် ကန့်သတ်ချက်တွေ အတော်များသတဲ့။ လက်ထက်ဖို့ အတွက် ထောက်ခံချက်တွေ စာရွက်စာတမ်းတွေ အထောက်အထားတွေ အတော်ပြည်စုံမှ ယူလို့ရသတဲ့။ ဒီလို အထောက်အထားတွေ ပါရမယ်ဆိုတဲ့ ထုံးစံက ဟိုးအရင် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် မရှိခဲ့ပေမယ့် ချာကလာရွှေပြည်ကို မကြာသေးခင်က ဒေသစာရီကြွချီတော်မှုလာတဲ့ သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ ဘုတ်အုပ်ကျမ်းတော်ကြီး အလိုအရ ဒီထုံးစံပေါ်လာရပေါ့ကွယ်။ ဒီကျမ်းစာထဲမှာ ဒီလို ထုံးစံတွေ စည်းမျဉ်းတွေ ကို ရေးမှတ်ထားသတဲ့။ ဒီကျမ်းစာထဲက ရေးမှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ရှေးဟောင်း အက္ခရာတွေနဲ့ ရေးမှတ်ထားတာ မို့ ရွာသားတွေက မဖတ်တတ်ကြဘူး။ ဒီကျမ်းစာကို ဖတ်နိုင်တာကတော့…
June 27, 2013 in ဘာသာရေးရာ, ဟာသသရော်စာ.
နင့် လား ဟဲ့ ဟမ်ဘာဂါ
အနုပညာမြတ်နိုးသူ လူငယ်တစ်သိုက် ပန်းချီပြပွဲနဲ့ ကဗျာရွတ်ပွဲ ရှိရာဆီသွားခဲ့ကြသည်။ ကဗျာဆရာ နာမည်ကြီး တစ်ယောက်က လူငယ်တွေ ကို ချီးမြောက်သည့် အနေဖြင့် ဒီပွဲကိုတတ်ရောက် မယ်ဆိုတာ အားလုံး သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ လေးစားနှစ်သက်လှသည် ဆရာကြီးမို့ အားလုံးက သူကို စောင့်မျှော် နေကြသည်။ ကဗျာဆရာကြီး ရောက်လာသည်။ ကဗျာချစ်သူ လူငယ်တစ်စုကလည်း ဆရာကြီးအား ကဗျာတစ်ပုဒ် လောက် ချီးမြင့်တဲ့ အနေနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် ရွတ်ဖို့ တောင်းဆိုကြသည်။ ဆရာကြီးကလည်း ကဗျာရွတ်ပေးပါမယ် ဟုဆိုကာ ပရိသတ်အလယ် ရောက်ပြီး ချောင်း တစ်ချက် ဟန့်လိုက်သည်။ ဆရာကြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စရွတ်လေ သည်။ ဆရာကြီး ကဗျာကား နင်လား ဟဲ့ ဟမ်ဘာဂါ နင်လား ဟဲ့ ဟမ်ဘာဂါ နင်လား…
June 27, 2013 in ခံစားမိသမျှ, ဟာသသရော်စာ, အက်ဆေး စာတန်း.
ကျွန်တော်၏ ပေါင်းသင်းအပ်သော လူမိုက်များ နှင့် မပေါင်းသင်းအပ်သော လူလိမ္မာများ
ဘုရားရှင်ဟောသော မင်္ဂလာသုတ်မှာ အာသေ၀ါနစ ဗာလာနံ (လူမိုက်ကို မပေါင်းနဲ့)၊ လူမိုက် ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေ၀နာ(ပညာရှိ လူလိမ္မာကိုပေါင်းပါ) လို့ ဟောထား လျက်နဲ့ မောင်ဥဂ္ဂါ ဆိုတဲ့ ငချွတ်က ဘာကြောင့် ပေါင်းသင်းအပ်သော လို့ ပြောတာလဲ ဆိုပြီး အပြစ်တင် မစောပါနဲ့ ဗျာ။ အခုခေတ်ကြီးက ပညာရှိ လူလိမ္မာဆိုသူတွေ က ဗလာနံဖြစ်နေပြီး လူမိုက်တွေက ပဏ္ဍိတ ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ပေါင်းသင်းအပ်သော လူမိုက်များ (ငါးကြော်မကြိုက်သော ကြောက်မိုက် များ) လူတွေက က လူမိုက်လို့ ပြောတဲ့ သူတော်တော်များများဟာ ကျွန်တော် အပေါင်းအသင်းတွေပါ။ ကျွန်တော် ပေါင်းတဲ့ လူမိုက်တွေ က ဗလာနံမဟုတ်တဲ့ လူမိုက်တွေ ပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ လူမိုက်တွေပါ။ ဒီအသုံးအနှုန်းလေးကို…
June 26, 2013 in ခံစားမိသမျှ, ဟာသသရော်စာ.
ပြကွက်(၁) မနေ့က MRTV-4တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ကြည့်လိုက်ရသည် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း အကြောင်း ပြသနေသည်။ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ကလေးတွေ ကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အင်တာဗျူးသည်။ ဘာတွေ ဗျူးလဲဆိုတော့ ဘုရားဂုဏ်တော်၊တရားဂုဏ်တော်၊သံဃာဂုဏ်တော်တွေ၊ ဖွားဘက်တော် ၇ ပါး သစ္စာ မဂ္ဂင် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေ ကို သင်တန်းသူ လေးတွေ က ပြန်ဖြေနေတာကို တွေမိသည်။ သင်တန်းသူလေးတွေ ပြန်ဖြေတဲ့ ပုံစံက လက်လေးပိုက် ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး MRTV-4က အင်တာဗျူးတဲ့ သူကို သူ့ကျောင်းက ဆရာမကို စာပြန်ရွတ်သလို တလစက် ထောက်ထောက်နဲ့ ရွတ်သွား နေသည်။ ထိုသင်တန်းကို ကျွန်တော် မချီးကျူးမိပါ။ ပြကွက်…
June 26, 2013 in လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ, ဟာသသရော်စာ, အက်ဆေး စာတန်း.
ကျွန်တော်ရဲဘော် အောင်အောင်ရေးထားတာ ပါ တွေးစရာများ ရမလားလို့ ကျွန်တော် Alternative Mainstream ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အသုံးပြုတော့ ကျွန်တော့်ကို ဥဂ္ဂါက ခွေးကောင် မင်း တော်တော် ပေါက်တတ်ကရစကားလုံးတွေထွင်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးဆဲပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း ကျွန်တော့်ကို ထပ် ဆဲဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးထွင်လိုက်ပြန်ပြီလေ။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ Sustainable Dependency တဲ့ ရေရှည်တည်တံ့သော မှီခိုခြင်းလေ။ ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလောကမှာ အရမ်း လူသုံးများကြတယ်မဟုတ်လား၊ ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးရေးတို့၊ ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးတို့။ ကျွန် တော်ကလည်း အားကျမခံတီထွင်လိုက်တာလေ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ တော်တော်များများ ဝိုင်းဆဲကြမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့၊ ကိုယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရပ်ကျေးလူထုက ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ပြီး သူတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကြရေးကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊…
June 25, 2013 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး, လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ, ဟာသသရော်စာ, အက်ဆေး စာတန်း.